निकटता मार्केटिंग: यो के हो? के प्रकारहरु?
म मेरो स्थानीय क्रोगर (सुपरमार्केट) चेनमा हिंड्ने बित्तिकै, म मेरो फोनतिर हेर्दछु र अनुप्रयोगले मलाई सचेत गर्दछ जहाँ म या त मेरो क्रोजर बचत बारकोड जाँच गर्नका लागि पप अप गर्न सक्दछु वा खोज्नको लागि र अनुप्रयोगहरू खोल्न सक्दछु। aisles। जब म एक भेरिजन स्टोरमा जान्छु, मेरो अनुप्रयोगले मलाई कारबाट बाहिर निस्कनु भन्दा पहिले चेक-ईनको लागि लिंकको साथ सचेत गर्दछ।
यी आधारित दुई प्रयोगकर्ता अनुभव बृद्धि गर्नका दुई उत्कृष्ट उदाहरणहरू छन् हाइपरलोकल ट्रिगरहरू यस उद्योगलाई चिनिन्छ निकटता मार्केटिंग.
यो कुनै सानो उद्योग छैन, २०२२ सम्ममा .52.46२..2022 अर्ब डलर बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ मार्केटसेन्डमार्केटहरू.
निकटता मार्केटिंग के हो?
निकटता मार्केटिंग कुनै पनि प्रणाली हो जुन स्थान प्रविधिहरू उनीहरूको पोर्टेबल उपकरणहरू मार्फत ग्राहकहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न प्रयोग गर्दछ। निकटता मार्केटिंग विज्ञापन प्रस्ताव, मार्केटिंग सन्देशहरू, ग्राहक समर्थन, र तालिका, वा एक मोबाइल फोन प्रयोगकर्ता र तिनीहरूले नजिकको दूरी मा हो स्थान बीचमा अन्य संलग्नता रणनीति को एक होस्ट समावेश गर्न सक्दछ।
निकटता मार्केटिंग को प्रयोगहरू कन्सर्ट, जानकारी, गेमि, र सामाजिक अनुप्रयोगहरू, खुद्रा चेक इनहरू, भुक्तानी गेटवेहरू, र स्थानीय विज्ञापनमा मिडियाको वितरण समावेश गर्दछ।
निकटता मार्केटिंग एकल टेक्नोलोजी होइन, यो वास्तवमा विभिन्न विधिहरूको एक नम्बर प्रयोग गरी लागू गर्न सकिन्छ। र यो स्मार्टफोन उपयोगमा सीमित छैन। आधुनिक ल्यापटपहरू जुन जीपीएस सक्षम छन् पनि केहि निकटतम टेक्नोलोजी मार्फत लक्षित गर्न सकिन्छ।
NFC - फोनको स्थान द्वारा निर्धारित गर्न सकिन्छ नजिक क्षेत्र संचार (NFC) एक उत्पादन वा मिडियामा एक RFID चिप जडान फोनमा सक्षम। एनएफसी एप्पल पे र अन्य भुक्तानी टेक्नोलोजीहरूको लागि डिप्लोमेन्ट हो तर भुक्तानीमा सीमित हुनुपर्दैन। उदाहरणका लागि संग्रहालय र स्मारकहरूले एनएफसी उपकरणहरू स्थापना गर्न सक्दछन् टुर जानकारी प्रदान गर्नका लागि। खुद्रा आउटलेटहरूले उत्पाद जानकारीको लागि ओछ्यानमा NFC लगाउन सक्छ। त्यहाँ एक टन एनएफसी टेक्नोलोजी संग मार्केटिंग को अवसर छ।
Geofencing - तपाईं आफ्नो फोन संग सार्ने को रूप मा, तपाईंको सेलुलर कनेक्शन टावरहरू बीच व्यवस्थित छ। पाठ सन्देश मार्केटिंग प्रणालीहरूले तपाईंको सन्देशको प्रयोग केवल टेक्स्ट सन्देशहरू मात्र ती उपकरणहरूमा पठाउँछन् जुन विशेष क्षेत्र भित्र हुन्छन्। यो यस रूपमा चिनिन्छ एसएमएस जियोफेन्सिंग। यो सटीक टेक्नोलोजी होइन, तर तपाईका सन्देशहरू लक्षित श्रोताको लागि मात्र तपाईंले चाहेको समयमा चाहिएको समयमा मात्र पठाइएको हो भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न यो उपयोगी हुन सक्दछ।
ब्लुटुथ - खुद्रा स्थानहरु को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ beacons जुन तपाईंको स्मार्टफोनमा जडान गर्न सकिन्छ। सामान्यतया त्यहाँ एक मोबाइल अनुप्रयोग छ कि प्रविधि सक्षम र अनुमति अनुरोध छ। तपाईं ब्लुटुथ मार्फत सामग्री पुश गर्न सक्नुहुन्छ, वाइफाइबाट स्थानीय वेबसाइटहरू सेवा दिन सक्नुहुन्छ, बीकनलाई इन्टरनेट पहुँच बिन्दुको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, क्याप्टिभ पोर्टलको रूपमा कार्य गर्न सक्नुहुन्छ, अन्तर्क्रियात्मक सेवाहरू प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ, र कुनै इन्टरनेट जडान बिना अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ।
आरएफआईडी - त्यहाँ बिभिन्न प्रविधिहरू छन् जुन रेडियो तरंगहरूको प्रयोग वस्तु वा व्यक्ति पहिचान गर्नका लागि गरिन्छ। आरएफआईडी ले उपकरणमा एक सिरियल नम्बर भण्डारण गरेर कार्य गर्दछ जसले वस्तु वा व्यक्ति पहिचान गर्दछ। यो जानकारी एक माइक्रोचिपमा सम्मिलित छ जुन एन्टेनासँग जोडिएको छ। यसलाई आरएफआईडी ट्याग भनिन्छ। चिप आईडी जानकारी पाठकलाई प्रसारित गर्दछ।
निकटता आईडी - यी निकटता कार्ड वा सम्पर्क रहित आईडी कार्ड हुन्। यी कार्डहरूले केहि ईन्च भित्र रिमोट रिसीभरसँग संवाद गर्न इम्बेडेड एन्टेना प्रयोग गर्दछ। निकटता कार्डहरू केवल पढ्ने उपकरणहरू हुन् र मुख्यतया ढोका पहुँचका लागि सुरक्षा कार्डको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यी कार्डहरूले जानकारीको सीमित मात्रामा होल्ड गर्न सक्दछन्।
कम्पनीहरू जसले यी प्लेटफर्महरू विकास गर्न चाहान्छन् मोबाइल अनुप्रयोगहरू जुन मोबाइल उपकरणको भौगोलिक स्थानमा, अनुमतिको साथ, बन्धनमा परेका छन्। जब मोबाइल अनुप्रयोग एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान भित्र पुग्छ, तब ब्लुटुथ वा एनएफसी टेक्नोलोजीले तिनीहरूको स्थान इंगित गर्न सक्दछ जहाँ सन्देशहरू ट्रिगर गर्न सकिन्छ।
निकटता मार्केटिंग सँधै महँगो अनुप्रयोग र जियोसेन्ट्रिक टेक्नोलोजीको आवश्यकता पर्दैन
यदि तपाईं सबै टेक्नोलोजी बिना निकटता मार्केटिंगको फाइदा लिन चाहानुहुन्छ… तपाईं सक्नुहुन्छ!
QR कोडहरू - तपाईं त्यसमा QR कोडको साथ निर्दिष्ट स्थानमा साइनेज प्रदर्शन गर्न सक्नुहुनेछ। जब एक दर्शकले QR कोड स्क्यान गर्न आफ्नो फोन प्रयोग गर्दछ, तपाइँलाई तिनीहरू कहाँ स्थित छन् ठ्याक्कै थाहा छ, एक प्रासंगिक मार्केटिंग सन्देश पठाउन सक्छ, र तिनीहरूको व्यवहार अवलोकन गर्नुहोस्।
वाइफाइ हटस्पट - तपाई नि: शुल्क वाइफाइ हटस्पट प्रस्ताव गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं कहिले एयरलाईन जडान वा स्टारबक्समा लगइन हुनुभयो भने, तपाईंले गतिशील मार्केटिंग सामग्री देख्नुभयो जुन वेब ब्राउजर मार्फत प्रयोगकर्तालाई सीधा धकेल्छ।
मोबाइल ब्राउजर खोज - तपाईंको कम्पनी वेबसाइटमा जियोलोकेशन तपाईंको स्थानमा मोबाइल ब्राउजर प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू पत्ता लगाउन समावेश गर्नुहोस्। तपाईं पपअप ट्रिगर गर्न सक्नुहुनेछ वा डायनेमिक सामग्री प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ त्यो व्यक्तिलाई लक्षित गर्नका लागि - चाहे उनीहरू तपाईंको वाइफाइमा छन् वा हुँदैनन्। यसको नकारात्मक पक्ष भनेको यो हो कि प्रयोगकर्तालाई पहिले अनुमति दिइनेछ।
छनोट .ण सानो र मध्यम आकारको उद्यमहरू (एसएमई) को लागि निकटता मार्केटिंगको एक सिंहावलोकनको रूपमा यस इन्फोग्राफिक विकसित गरेको छ:
टैग: बिकनब्लूटूथब्लुटुथ मार्केटिंगछनौट .णgeofencingहप्परलोकेशनहटस्पट मार्केटिंगअति-स्थानीयकरणहाइपरलोकलhyperlocal मार्केटिंगibeaconमध्यम आकारको व्यापारमोबाइल ब्राउजि।क्षेत्र संचारको नजिकnfcनिकटता मार्केटिंगनिकटता मार्केटिंग तथ्या .्कQR कोडहरूसानो र मध्यम आकार का उद्यमहरूसाना व्यापारSMEनिकटता मार्केटिंग के होवाइफाइ हटस्पट
निकटता आधारित मार्केटिङ समाधान, तपाइँको ग्राहकहरु लाई व्यक्तिगत, अद्वितीय किनमेल अनुभव प्रदान गर्न सक्छ
विभिन्न विकल्पहरू सूचीबद्ध गर्नुभएकोमा राम्रो ब्लग धन्यवाद। म सोचिरहेको थिएँ कि तिनीहरूले यस ठाउँमा कसरी खेले। के तपाईलाई थाहा छ कि म शीर्ष निकटता मार्केटिङ टेक्नोलोजी निर्माताहरूको सूची कहाँ फेला पार्न सक्छु? म विशेष गरी ब्लुटुथ प्रविधि खोज्दै छु।
मार्स 25, 2016 मा 3: 45 एएम